Ciidamada Syria oo gudaha u galay Magaalada Jisr al-Shughour,ee galbeedka dalkaasi. – SBC
Ciidamada Syria oo gudaha u galay Magaalada Jisr al-Shughour,ee galbeedka dalkaasi.
Sida ay wakaalada wararka Reuters ay kasoo xigatay goob joogayaal ku sugan deegaanka Jisr al-Shughour,ee Gobolka Idlab ee galbeedka Syria,waxaa magaaladaasi goor dambe oo habeenkii xalay ahaa galay,Kumanaan ciidamo Syrian ah oo saaran dabaabadaha dagaalka.
Dowlada Syira ayaa ku tilmaantay galitaanka Ciidamadeeda ee deegaankaasi in ay tahay mid amaanka iyo kala dambaynta Magaaladaasi dib loogu soo celinayo.
Kumanaan Syrian ah ayaa goor sii horaysay isaga cararay deegaankaasi,iyagoo ka cabsi qaba in ay Ciidamada Amaanka Syria uga aar gutaan dilkii horay magaaladaasi loogu gaystay Ciidamo ka tirsan kuwa Amaanka ee Syria.
Waxaa weli kasii gudbaya xadka u dhexeeya Syria iyo Turkiga kumanaan Syrian ah,,iyadoona kooxaha gargaarku ay ku tilmaamayaan barakaca dadka ka cararay guryahooda in ay tahay musiibadii ugu xumayd ee dalkaasi soo wajahda.
Dowlada Maraykanka waxaa ay cambaaraysay xaalada ka taagan Jisr al-Shughour,waxaana ay ku dhaliishay Dowlada Syria in ay gaysanayaan xadgudubyo ka dhan ah bini aadanimada.
Dowlada Syria waa ay beenisay eedeymaha loogu soo jeedinayo in ay ku beegsanayso shacabka,iyadoona sheegtay in ay la dagaalamayso kooxo hubaysan oo isku aruursanaya galbeedka iyo weliba waqooyiga dalkaasi.